कोरोना भाइरस वि,रुद्धको भ्याक्सिन परीक्षणको अन्तिम चरणमा, जुलाइमा आउन सक्छ खुसीको खबर !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोना भाइरस वि,रुद्धको भ्याक्सिन परीक्षणको अन्तिम चरणमा, जुलाइमा आउन सक्छ खुसीको खबर !!
अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थले भ्याक्सिनहरुको फाइनल टेस्टिङ र ठूलो परिमाणमा भइरहेका अध्ययनहरुमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छ । परीक्षणका क्रममा रहेका सम्भावित भ्याक्सिनमध्ये अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको भ्याक्सिन पनि छ जसलाई निकै विश्वसनीय भ्याक्सिन मानिएको छ ।भ्याक्सिन रिसर्च सेन्टरका सदस्य डा. जोन मेस्कोलाले नेशनल एकेडेमी अफ मेडिसिनको बैठकमा भनेका छन् ‘यदि सबै कुरा ठिक तरिकाले भयो भने यो वर्षको अन्त्यसम्म कुन भ्याक्सिनले कोरोनाभाइरस वि रुद्ध काम गर्छ भन्ने निश्चित हुनेछ !